အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ Archives - Page5of 28 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
?အမာရွတ်ပျောက်ဆေးများအကြောင်း သိကောင်းစရာ? ဒဏ်ရာဆိုတာတွေက နာကျင်စရာတွေပေးသလိုပဲ အမာရွတ်တွေကတော့ အဲ့ဒီ့ နာကျင်စရာတွေကို ပြန်ပြောင်းသတိရစေနိုင်စွမ်းပါတယ်။ ဒီ့ထက်ပိုဆိုးတဲ့ အချက်ကတော့ အမာရွတ်ဆိုတာ ရှိတဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီး အသားအရေ အလှအပကို အမြဲတိုက်ခိုက် ထိုးနှက်နေတတ်ပါတယ်။ အမာရွတ်မှန်ရင် ရာနှုန်းပြည့် လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။ ဒီအမာရွတ်တွေ…
?ဝက်ခြံပျောက်ဆေးများအကြောင်း သိကောင်းစရာ? ဆဲလ်ဖီကင်မရာတွေ ၊ ဓာတ်ပုံ effects တွေ ဘယ်လောက်ကောင်းလာပြီပဲဆိုဆို လူဆိုတာ ပုံရိပ်ယောင်ကမ္ဘာထဲမှာပဲ နေရတာမှ မဟုတ်တာ။ ပြင်ပကမ္ဘာကြီးနဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ အမြဲပြရမဲ့ မျက်နှာလေး မှာ အဖုအပိမ့်ကင်း ဝက်ခြံရှင်းပြီး လှပသန့်ပြန့်နေဖို့ လိုတာပေါ့။ ဝက်ခြံဖုတွေရဲ့…
ဗောက်ထတက်သူများအတွက် နည်းလမ်းကောင်း ခုလိုစိုစွတ်တဲ့ မိုးရာသီ နှင့် အေးမြခြောက်သွေ့တဲ့ဆောင်းရာသီတွေမှာ ဆံကေသာတွေကြား ဗောက်ထတက်ပါတယ်။ မိမိခေါင်းမှာ ဗောက်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်လည်း တော်တော်ကို နေရထိုင်ရ အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အရာပါ။ ခေါင်းဖြီးလိုက်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကုတ်လိုက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေကျနေတဲ့ ဖောက်ရောဂါ။ ဒါကြောင့် မိန်းကလေးတော်တော်များများဟာ လူကြားထဲ သွားမယ်ဆိုရင်တောင်…
အလှအပအတွက် ရှားစောင်းလက်ပတ် ရှားစောင်းလက်ပတ် လို့ ပြောလိုက်တာ သူ့မှာ အသားအရည်အတွက်၊ အလှအပအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အချက်တွေ အများကြီးရှိတာကို ပျိုမေတိုင်းကတော့ သိပြီးသားထင်ပါတယ်ရှင် …. လျှားစောင်းလက်ပတ် မှာဆိုရင် ဗီတာမင်အေ၊ ဗီတာမင်စီ၊ ဗီတာမင် B12 နှင့် သံဓာတ်…
အမာရွတ်အသစ်နှင့်အမာရွတ်အဟောင်း အမာရွတ်တွေကတော့ လူတိုင်းနဲ့မကင်းကြတဲ့သေရာပါအမှတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကလေးဘဝကဆော့ကစားမိလို့၊ဒဏ်ရာရလို့၊ချော်လဲလို့၊သူများကလုပ်လို့၊ကိုယ့်ဖာသာဖြစ်လို့ စသဖြင့်အကြောင်းပေါင်းစုံပါပဲ။ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အမာရွတ်တွေကတော့ကိုယ်နဲ့အမြဲပါသွားတော့မှာပါပဲ။တစ်ချို့အမာရွတ်တွေက လူမသိသာတဲ့နေရာမှာဖြစ်လို့ဘာမှအနှောင့်အယှက်မပေးပေမယ့် လူမြင်သူမြင်နေရာတွေမှာဖြစ်တော့ကျ အလှပျက်ရတတ်ပါတယ်။အမာရွတ်တွေဟာ မကုပဲထားရင်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပါသွားမှာဖြစ်ပြီး ကြာလာတာနဲ့အမျှ ကုသရတာလက်ဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် အမာရွတ်အသစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊အဟောင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပျောက်ကင်းစေချင်ကြတဲ့သူများအတွက် အမာရွတ်ပျောက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ အမာရွတ်အသစ်၊အဟောင်းတွေကို ဘယ်လိုဖျောက်မလဲ??? အောက်ပါနည်းလမ်းကလေးတွေကအတော့်ကိုအသုံးဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်- ၁။ရှားစောင်းလက်ပတ်။ -ရှားစောင်းလက်ပတ်အရည်ကို အမာရွတ်ပေါ်မှာ စက်ဝိုင်းပတ်ပုံစံဖွဖွလေးစိမ့်ဝင်အောင်လိမ်းပေးပါ။…
အားဆေးဘာကြောင့် သောက်သင့်တာလဲ လူနာတိုင်းက “ဆရာ..ဘာအားဆေးသောက်ရမလဲ” ညွှန်ခိုင်းတတ်ကြပေမဲ့ “အားဆေးဘာကြောင့် သောက်သင့်တာလဲ”ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုတော့ မေးသူမရှိသလောက်ပါပဲ။ လူတိုင်းက အားဆေးသောက်ရင် စားကောင်း အိပ်ပျော် ပိုကျန်းမာစေမယ်လို့ ယုံကြည်လက်ခံထားကြပြီးသားမို့ ဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်တော့ အားဆေးဆိုတာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မလိုဘဲ ဝယ်ယူသောက်သုံးနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးတွေဖြစ်ပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ ဘာအတွက်…